Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: HARKA OL KAASUU IRRAA GARA QAWWEE KAASUUTTI TARKAANFACHUUN FURMAATA XUMURA GABRUMMAATI
HARKA OL KAASUU IRRAA GARA QAWWEE KAASUUTTI TARKAANFACHUUN FURMAATA XUMURA GABRUMMAATI
HARKA OL KAASUU IRRAA GARA QAWWEE KAASUUTTI TARKAANFACHUUN FURMAATA XUMURA GABRUMMAAT
‪#‎Oromooprotests‬,Ji'oota saddeettan dabran kana harka keenya ol kaafnee hidhamuu, tumamuu, sarbamuu, mirga dhabuu bira dabarree ajjeeffamuu keenya, gochi hamaan duguuggaa sanyii oromoo mirga isaanii gaafatan, lafa abbaa isaanii mormatan irratti raawatamaa jiraachuu dinnee jirra tan jettu mul'isuuf ture. Eeyyee! appartayidii wayyaanee ykn goolii diimaan 2ffaa nurratti gaggeeffamaa jiru mormuuf jecha harka keenya lamaan mataa gubbatti walitti hiinee master pilaanii shiraa hadheeyfannee dinne. Obboleeyyan keenya gaaffii nagayaa gaafatan rasaasa wayyaaneetiin laboobamaa jiruus mormuu qofa osoo hin taane gumaa dhiiga isaaniitiis baasuuf wa'ada galuu keenya mirkaneessuufiis itti fayyadamaa turre. Xiqqaaf guddaa osoo hin janne, dhiiraaf dhalaa, ogeessaaf hojjata, kan biyya keessaaf alaa marti ilmaan oromoo mootummaa wayyaanee kijibaan afaan iteeyfatee soba afuufu jibbuu keenya ibsaa turre.
Kanarraa ka'uun rakkoo ilmaan oromoo irratti raawwatamaa jiruus ijaafi gurra addunyaatiin gahuuf hayyoonni karaa diploomaasiin, kaan gara miidiyaatiin, kaan odeeffannoo battalumatti dabarsuun, roga hundaan namuu waan dandahu gumaachaa, halkanii guyyaa hidhatanii qabsaawaa turan. Waa'ee oromoo miidiyaalee gurguddaa Addunyaa baayyeen irratti hirmaatee gabaasa dhimma keenyarraa dubbachaa ture. Dhaabbooliin mirga namoomaa baayyeeniis waa'ee keenya dubbataa turan. Kun miidhaa keenyaaf ragaa guddaa yoo tahu, qabsoo keenyaaf humna dabalaati. Sadarkaa kanarra gahuun bu'aa qabsoo waloon godhamee yoo tahu, keessattuu sabboontoota barattootaafi qeerroolee biyya keessaatiin injifannooleen boonsaan kan galmaa'aniifi jirma gabrummaa kan sossoosan waan tahaniif kan irratti lubbuu dhaban seenaan isaan haa yaadatu, kan irratti madaawan madaan isaanii madaa heenaa haa taatuuf jechaa walitti qabaan hunda isaanii galanni isaanii bilisummaa qabsaa'aniif argachuu haa ta'u.
Amma immoo marsaa jijjiiramaa seenuun hidda gabrummaa cirame qajjiisa qal'aan lamaa sadiin walitti hafeen reeqqisaa jiru mogoluun dibaa gabrummaa fonqolchuuf, akka inni azalaa hin baafannetti gufuu lafa keessatti haftu bakka dhabamsiisuun, jirma wayyaanee kulloonnee bobeeysinee daaraa godhuuf gulantaa xumuraa tan jalqaba bilisummaa seenuun dirqama filanno maleessa. Marsaan kun cehiinsa harka kaasuu irraa gara qawwee kaasuutti tarkaanfachuu yoo tahu inniis haalli barbaachisu marti xumuramee biyya keessaafi alaas akkaataa walitti dhufuun itti danda'amu haala mijjeessuun dirqama. Dirqama kana ammoo paartiileen bilisummaa oromoof qabsooyna ja'an marti gamtaan ol ka'uutu irra jiraata. Eessatti? Akkamitti? Yoom? Gaaffiilee jettuuf ammoo deebii isaan warra dhaaba qabsoo bilisummaa oromootiif hundeeffamne ifiin ja'aniif dhiifna, isaan nuuf haa deebisan.
Harka keenya walitti hiinee ol kaasuun keenya hidhaaf ajjeechaa keenya ibsuus roga biraatiin ofuma keenyaaf wa'ada oromummaa seenuus kan mul'isuudha. Mallattoon harka keenya walitti caafnee diddaa keenya mul'isuu kun dhalataa oromoo 60% ol kan hammate akka tahe niin tilmaama. Kana malees hiriirri gandoota, aanoota, magaalootaa, godinoota, manneen baruumsaa sad. 1ffaa irraa hanga dhaaboolii barnoota ol aanootti warraaqsi isaa kan finiinaa ture tahuu ragaan argaa keenya caalu hin jiru. Warri wayyaanee kan yaaddoofi sodaa keessa dachiin kombolteen if jajjabeessuufi tasgabbii dharaatiin if ijaaruuf "naannoo tokko tokkotti humnoota badiitiin wanni jeequmsa fakkaatu ka'uu yaaluus tarkaanfii hatattamaa mootummaan fudhateen ibidda kashlabboota guutumatti dhaamsinee jirra" jechuun soba goobe dhugaa fakkeessuuf yaaluus birbir ja'ee hollachaa ija babaasuun isaa ifitti amantummaan isaa bututu kan nuuf mirkaneessuu dha.
Wayyaaneen yeroo kanatti carraaqqiin isiin gootu hanga dandahamutti diina oromoo baayyisuun humna oromoo bakka bakkatti bubuuftee sanyii simbirroon funaante godhuuf yaalaa jirti. Nuti garuu abshaala dhagaa itti darbatan galmaan ijaarratu taanee diina oromoo xiqqeessinee fira oromoo baayyifachuu qabna. Diina tokko hin qabnu yoo wayyaanee taate malee. Diina keenya kana qeerroon biyya keessaa harka duwwaa qawwee isaanii dura dhaabbattee fincila finiinsuu qofaan ifirratti fincaansisaa turan. Warri biyya alaafi keessaas gamtaan gocha hadhaawaa wayyaanee kana mormuufi karoora jallaa balaaleeffachuuf harka keenya walitti caafnee diddaa keenya agarsiisaa turree jirra. Harka keenya ol kaafnee mul'isuun san diddaa qofaaf miti. Erga waan tokko diduu mul'iftee booda wanni ati diddu san karaa addaatiin raawwatamuu isaa yoo barte akka hin raawwanneef tarkaanfii fudhatta. Kanaafuu diina keenya guddaafi nurratti goobee ture, kan amma barattoonni harka duwwaa akka qeeydii dhumteetti hurgafan kana diddiignee irraa hobbaasuuf akkuma harka keenya walitti caafnee mormii keenya dhageessisaa turre, qabsaa'uufiis wa'ada galle san haaroomsinee gulantaa harka kaasuu irraa gara qawwee kaasuutti tarkaanfachuun dirqama taha.
Yeroo ammaa dargaggoonni oromoo biyya keessaas tahee biyyoota biraa jiran marti WBO'n mee? Haala kamiin itti makamuu dandeenya? Wayyaanee barbadeessuuf falli qawweedha dhaaba qabsoo hidhannoon itti hirmaannu eessatti arganna? Garaa nu oowwe kana akkamitti qawwee argannee if qabbaneessina? Jechaa jiran. Eeyyee! Mootummaa abbaa irree barattoonni harka duwwaa raase kana bakkaa haquuf falli amma boodaa qabsoo hidhannoo qofa. Ummanni yeroo ammaa qabsoof cophee jira. Dargaggeeyyiin marti, qeerroofi qarreen oromoo hundi hidhatanii gara tarkaanfii aara nama baasuutti galuuf if kennanii jiran. Yoo amma copha kana irraa hin fayyadamne ni gu'a. Yeroo sammuun ummataa gaante, rimaya bilisummaa qabdu kanatti deebii hatattamaa argachuu baannaan deebi'ee maseena. Abdiis muree kana booda deebi'ee si'aawuuf ammoo waggoottan 25'n dabran caalaa itti fudhata.
Eeyyee! Kanaafi kan dargaggoonni amma biyya keessaa, "Siifan lolaa WBO koo narran gortu?" Jechaa jiru. WBO maaliif irra hin gorturee? Siifan jira jedhee si yaamaa jira qeerroon. Ati hoo maaliif hatattamaan isiniifiin jira qeerroo koo hin jettuun ree? Waraana bilisummaa oromoo jechuun ABO qofa osoo hin taane kan dhaaba oromoo bilisoomsuuf qabsaa'u mara hammatuudha. Dhaabooliin bilisummaa oromootiif qabsooyna jedhan meeqa tahu laata? Kan maqaafi mataan jiru 20 ol caaluu hin oolan jedheen yaada. Kan maqaa bilisummaa oromootiin qabsaa'uu marti hatattamaan waliif galuun qabsoo ifaafi ifatti labsuu qaban. Waliif galuu didan ammoo namuu karuma jiruun seenee qabsaa'uun dharraa bilisummaa ilmaan oromoo haa baasu. San booda akkuma barbaachisuun biyyattii waliin hogganuuf qophii tahuu qaban.
Kana tahuu baannaan harki ol ka'ee mormii ibsate, kan qabsaa'uufiis wa'ada gale, kan amma qawwee argatu ol kaasuuf qophii jiru kun yoo qawwee harka kaayuu baatan yeroo muraasa booda akkuma mallattoo hidhaa mul'isuuf walitti caafamee ol kaafame kanatti hidhamee kan hafu tahuu isaati. Kanaafuu, yeroo gabaabatti karaa dargaggoonni kun ittiin qabsotti makamuu danda'an mijjeessuufi hojitti seenuun haala itti danda'amu beeksisuu irratti, dhaabboolii qabsoo oromoo keessattuu dhaaba hangafaafi dugugguruu qabsoo tahe ABO irraa deebii qabatamaa yeroo gabaabatti eegganna. Deebiin ammoo ibsa ejjannoo baasuun osoo hin taane, kilaash ol kaasuun haa tahu. Harka ol kaasuu irraa gara qawwee ol kaasuutti tarkaanfachuun furmaata xumuraati. Dhaamsa koo xumure.
Injifannoon kan ummata oromooti! (Afaaniin osoo hin tahin qabatamaan.)
Posted by Hasan Ismail at 3:13 PM